Ifulethi elingu-1 Bed For Sale in Horsham, West Sussex
Real Estate Listings: » Residential homes » Flats » GB » West Sussex » Horsham » Horsham » Ifulethi elingu-1 Bed For Sale in Horsham, West Sussex1
Izici: First floor studio apartment, Designed by award winning architect Takero Shimazaki, Allocated and covered parking space, Private balcony, Lift, Central position, Ideal first time or investment purchase, Fully fitted kitchen, Remainder of 10 year warranty, Close to transport links, walks, shops and town centre
Intengo yomhlahlandlela £ 160,000 - £ 175,000 Ifulethi lokuqala eliqediwe phansi lesitudiyo elenzelwe umklami onqobe umklomelo uTakero Shimazaki ngevulandi yangasese, indawo eyabelwe ukupaka, okusele kwewaranti yeminyaka eyi-10 futhi akukho chungechunge oluqhubekayo. Lesi sakhiwo simi maphakathi nendawo, futhi singafinyelela kalula izixhumanisi ezinkulu zezokuthutha, izitolo, izindawo zokuvakasha kanye nendawo yedolobha. Indawo yokuhlala iqukethe: Iphaseji lokungena elinekhabethe lokugcina nelokusakaza, igumbi lokugeza elinokufakwa kwe-Ideal Standard & Grohe nokuhlala / ukudla / igumbi lokulala elingena kuvulandi wangasese. Ikhishi lifakwe ukukhethwa okumangazayo kwamayunithi aphezulu e-gloss Italian, indawo yokusebenza yeQuartz nezinto zokusebenza ezihlanganisiwe ezibandakanya umshini wokuwasha / owomisa impahla, i-induction hob, i-ovini, i-microwave nefriji / iqhwa. Izinzuzo zifaka phakathi amawindi acwebezelwe kabili, ukufudumeza ngogesi, ukukhanya kwe-LED, ukubeka phansi i-Oak, uhlelo lokungena kwezokuphepha nge-fob ne-intercom, okusele kwewaranti yeminyaka eyi-10 bese uliphakamisela kuzo zonke izitezi. Kukhona indawo yokupaka eyabelwe futhi emboziwe eyi-1 nesitolo samabhayisikili. I-tenure: Leasehold Leasehold: iminyaka eyi-126 kusuka ku-2018 Inkokhelo yesondlo: £ 779 ezinyangeni eziyisithupha Ukuqashwa komhlaba: £ 165 ngonyaka
26 Carfax, Horsham